Te hahafantatra ve ianao raha manana Canine Filariasis ny alikanao? Jereo eto | Tontolo alika
La canari filariasis Io no anarana ahafantarana ny iray amin'ireo aretina katsentsitra mampidi-doza indrindra izay mety hisy fiatraikany amin'ny alika, ary io dia antsoina koa hoe ny aretim-po.
Ny areti-mifindra amin'ity aretina ity matetika dia amin'ny alàlan'ny moka izay efa nanaikitra alika voan'io aretina io teo aloha. Tena mampidi-doza ny filariasis satria vokatry ny katsentsitra mitondra ny anarana io dirofilaria immitis ary izany dia apetraka amin'ny faritra mety amin'ny fon'ny alika, na izany aza, io kankana io dia tsy misy fiantraikany amin'ny alika ihany, fa koa ny biby mampinono hafa toy ny amboadia, coyote, amboahaolo ary saka, ankoatry ny hafa.
1 Faritra izay miparitaka
2 Fambara ny filariasis amin'ny kaninina
3 Ahoana no hamaritana ity aretina ity?
4 Fitsaboana hampiharina
Faritra izay miparitaka
Azo antoka, Io aretina io dia miparitaka any amin'ny faritra iaraha-miasa amin'ny toetr'andro amin'ny famokarana ny moka. Amin'ny ankapobeny, areti-mifindra moka tigra no mampita azy, na izany aza, tsy izy ireo ihany.
Ok izaoinona no mitranga ho lasa moka ny moka? Rehefa mitondra ity bibikely ity Dirofilaria immitis, ny olitra ao amin'ny kankana dia hita ao anaty rora. Toy izao ny fizotrany: amin'ny manaikitra alika dia afaka mitondra ny kankana mankany ambonin'ny hoditry ny alika ny rora-bibikely.
Toy izany no idiran'ny filariae ao anatin'ny vatan'ilay biby voan'ny otrikaretina amin'ny lavaka vokatry ny kaikitry ny bibikely. Raha vao nitranga ny manaikitra, ny olitra miditra ny vatan'ny biby dia mahavita miditra amin'ny lalan-dra, ka mahatratra ny rafi-pitetezanao. Rehefa afaka volana vitsivitsy, dia lasa olon-dehibe izy ireo, mandroso mandra-pahazoany ny lalan-dra sy ny atrium havanan'ny fo.
Araka ny hitantsika, aretina mangina izy io izay maharitra volana maromaro vao hisehoany. Rehefa soritr'aretina voalohany ny olitra, satria manomboka manakana ny fiasan'ny mahazatra ny kankana ka miteraka fivontosan'ny lalan-dra.
Io aretina io dia mivelatra amin'ny rojo, izany hoe rehefa lasa olon-dehibe ny olitra dia manomboka miteraka ary hiditra amin'ny ra amin'ny alàlan'ny kankana kely, fantatra amin'ny anarana hoe microfilariae.
Avy amin'ny microfilariae dia manomboka ny fiparitahan'io aretina io, satria ireo no hihinana ny moka rehefa manaikitra ilay alika voan'ny aretina, ka lasa mpitatitra. indrindra filariasis dia tsy mifindra amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana eo amin'ny alika, mainka noho ny tsiambaratelo, ny hany fomba fampitana amin'ny alàlan'ny manaikitra amin'ny moka.
Fambara ny filariasis amin'ny kaninina
Raha te hahafantatra ianao raha misy filariasis ny alikanaoTokony ho fantatrao fa samihafa ny soritr'aretin'ny aretina, saingy misy toetra manokana mamaritra sy mamantatra ireo alika voan'ny aretina, anisan'izany ary ny tena misongadina indrindra dia ny havizanana be.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, rehefa eo amin'ny dingana mandroso ny aretina dia rehefa manomboka mipoitra ireo fambara, ohatra kohaka sy sempotra. Amin'ity tranga ity, ny kohaka sy ny fahasahiranana tokony alain'ny alika voan'ny tsimoka dia mifanentana amin'ny fisian'ny filariae ao amin'ny lalan-drà hita ao amin'ny havokavoka.
Ny tsy fahombiazan'ny fo dia vokarina rehefa mahatratra ny fo ny katsentsitra, ka manasarotra ny fikorianan'ny rà ara-dalàna. Azontsika atao ihany koa ny mahita olana amin'ny aty, manimba ny taova tena ilaina, nanomboka tamin'izay ny katsentsitra dia mety hanimba ny atiny amin'ny fanakanana ny vena cava.
Ny havizanana tafahoatra dia teboka fanombohana amin'ny soritr'aretina, satria amin'izany dia manomboka miseho ny aretina. Alika rehefa voan'ny kodiarana haingana kokoa noho ny mahazatra. Ny alika tratran'io aretina io dia mety hijaly amin'ny aretim-po, ny tromboembolisme ary ny fahafatesana; miankina amin'ny halaviran'ny fandrosoan'ny filariasis izany, mihevitra fa ny katsentsitra maty dia mitondra ho toy ny sakana misakana ny ra tsy hahatratra taova tena ilaina.
Ahoana no hamaritana ity aretina ity?
Voalohany, tsy maintsy mazava isika fa ny fisehoan'ny soritr'aretina sy ny fivoaran'ny aretina dia miankina amin'ny isan'ny katsentsitra izay mety hipetraka ao am-po na havokavoka. Raha ny marina, ary raha misy alika malemy ny alika dia afaka ny ho tonga lafatra amin'ny fiainany rehetra tsy mampiseho ny soritr'aretin'ny aretina tsy ho voakasik'izany na ho sarotra aminy.
Toy izany koa, ny tranga mifanohitra amin'izany dia mety hitranga ihany koa, izay taorian'ny nahafatesan'ny biby dia fantatra fa ny antony dia filariasis, na dia tsy nipoitra mihitsy aza ireo soritr'aretina ary tamin'ny faran'ny fianan'ny alika ihany no nahafantarana azy. Na izany aza, misy foana ny fomba sy fomba hamaritana ny sary klinika sasany mety hisy fiatraikany amin'ny bibintsika izany.
Ny iray amin'izy ireo dia ny fitondrana azy ireo matetika any amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny fanadinana mahazatra. Etsy ankilany, X-ray dia fitaovana tsara hijerena ny zava-mitranga na ny fihetsiky ny aretim-po sy ny lalan-dra. Torohevitra ihany koa ny echocardiography, ary koa ny fitsapana immunodetection.
Araka ny efa nolazainay, ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hisorohana an'io na aretina hafa dia ny ento tsy tapaka any amin'ny mpitsabo biby ny alikanayNa izany aza, ary raha ny famantarana ny sasany amin'ireo soritr'aretina voalaza etsy ambony dia tokony handeha haingana araka izay tratra ianao.
Ahoana no hahafantarana raha marary ny alikako
Ny fitondran-tena amin'ity aretina ity dia toy izao manaraka izao, ny kankana maharitra enim-bolana eo ho eo vao ho matotra. Ho an'ny ampahany, ny vavy amin'ireo katsentsitra ireo dia tompon'andraikitra amin'ny microfilariae izay miaina ao anatin'ny rafitry ny alika mandritra ny herintaona. Ny fisian'ireny kankana sy katsentsitra ireny dia manimba ny ain'ny biby, afaka miteraka lalan-dra, ankoatry ny zavatra hafa.
Momba ny fitsaboana misy na tsia hiadiana amin'ity aretina mampidi-doza ity dia azo lazaina izany misy fanafody misy izay afaka manafoana ireo endrika tsy matotra parasy hita tao anaty alika, ka manakana ny fivoarany sy ny fonenana manaraka azy ao am-po.
Safidy hafa izay miankina amin'ny fivoaran'ny aretina dia ny fitsabahana amin'ny fandidiana Mba hanatanterahana ny fitrandrahana ny filariae olon-dehibe, io fanapahan-kevitra io dia miankina amin'ny habetsaky ny katsentsitra azo porofoina amin'ny alika.
Tadidio fa ny fomba tsara indrindra hahatongavana amin'izany miady sy misoroka an'io aretina io fisorohana izany. Ny iray amin'ireo zavatra tokony hialana dia ny mandeha amin'ny faritra lena na vao maraina be na alina be dia be, satria ireo indrindra no ora misy ny moka indrindra, mahatadidy fa ny aretina dia mifindra amin'ny alàlan'ny manaikitra.
Amin'ny vanim-potoana misy ny moka be indrindra dia tokony hampiasaina ny mpanala, ary koa ny fitsaboana fisorohana fanafody azo ampiharina raha mbola asehon'ilay mpitsabo biby izany.
Azontsika atao koa ny misafidy ny hanome vaksiny ny alikanay amin'ny vaksininy fantatra amin'ny anarana hoe Guardian SR Injectable, izay mirakitra ny moxidectin, izay antiparasitika marindrano marindrano. Ampiharina subcutaneels ity ary ny alika dia tokony ho antitra mihoatra ny 12 herinandro. Noho izany, ny fomba tsara indrindra hikarakarana ny biby fiompinay amin'ity aretina mahatsiravina ity dia amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fisorohana ho fitaovam-piadiana lehibe hiadiana amin'izany. Araka ny hitantsika dia ilaina ny fanaraha-maso mba hialanao amin'ny toe-javatra mety hanimba ny fahasalamanao sy ny fiainanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Filariasis kaninina
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Cardigan sy Pembroke Welsh Corgi
Ny toetra mampiavaka ny Pembroke Welsh Corgi